Abantu baseKhanada ngoku banokuBhukha kuVavanyo lwePCR kwiHotele eJamaica ngexabiso eliNcitshisiweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Abantu baseKhanada ngoku banokuBhukha kuVavanyo lwePCR kwiHotele eJamaica ngexabiso eliNcitshisiweyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Uvavanyo lwaseJamaica lwangaphambi kokuHamba kubahambi baseKhanada
Abantu baseKhanada abahambela eJamaica ngoku baya kuxhamla kwiinkonzo zovavanyo lwePCR ezifikelelekayo nezifikelelekayo ngelixa bekwindawo ekuyiwa kuyo ngenxa yemizamo eqhubekayo yokuphembelela iJamaica Tourist Board (JTB). Amagosa aseJamaican asebenzisane neelebhu ezimbini zabucala kwisiqithi ukubonelela abahlali baseCanada ababuyela ekhaya ngokufikelela kwiimvavanyo ezingenamthungo zePCR kwihotele ngexabiso elithotyiweyo.
Iindwendwe zaseKhanada eziya eJamaica azizukwazi ukubhukisha iimvavanyo ze-COVID-19 zangaphambi kokuhamba ngokunciphisa okungaphezulu kwama-50% kwiindleko.
Abakhenkethi abahlala kwihotele enelayisensi eJamaica's Resilient Corridors kunye nezinye iindawo zokuhlala ezivunyiweyo banokucwangcisa uvavanyo lwePCR oluza kuqhutywa kwipropathi ngenkonzo ye-concierge.
Iiarhente zokuhamba nazo ziya kukwazi ukubhukisha uvavanyo lwePCR egameni labathengi babo kwangaphambili.
Ukuqala ngoMvulo, nge-25 ka-Okthobha, abatyeleli baseKhanada baya kuba nakho ukubhukisha uvavanyo lwabo olufunekayo lwangaphambi kokuhamba lwe-COVID-19 ngokuthe ngqo ngokusebenzisa Ikliniki yaseBayewest Wellness kwaye Izisombululo zeTekhnoloji Limited (TSL) ye-75 USD ye-USD (kubandakanywa neerhafu), ukunciphisa ngaphezu kwe-50% kwixabiso langaphambili lokuvavanya i-PCR. Iindwendwe kufuneka zicwangcise uvavanyo lwazo zisebenzisa i-portal yelabhoratri ye-intanethi ezinikeleyo ukuze bafanelekele eli zinga likhethekileyo.
Abakhenkethi abahlala kwihotele enelayisensi eJamaica's Resilient Corridors kunye nezinye iindawo zokuhlala ezivunyiweyo banokucwangcisa uvavanyo lwePCR oluza kuqhutywa kwipropathi ngenkonzo ye-concierge efanelekileyo. Abakhenkethi abahlala kwivilla, indlu yeendwendwe, okanye indawo yokuhlala banokubhukisha idinga lomntu kwindawo ekufutshane neBaywest okanye kwilabhoratri ye-TSL. Iiarhente zokuhamba nazo ziya kukwazi ukubhukisha uvavanyo lwePCR egameni labathengi babo kwangaphambili.
“Uvavanyo olutsha lwaseJamaica lwePCR ehotele kunye nokuncitshiswa kwamaxabiso kuya kutshintsha umdlalo Abahambi baseKhanada undwendwela indawo,” utshilo uMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. Edmund Bartlett. “Ezi nzame linyathelo lamva nje kwinkqubela yethu IJamaica IKHATHALELA Inkqubo, ukuzibophelela okubanzi kwendawo ekusingwa kuyo ekuboneleleni bonke abahambi ngamava akhuselekileyo nangenamthungo ngelixa bendwendwela isiqithi sethu esihle.”
"Ixesha elizayo lekwindla kunye namaxesha obusika abaluleke kakhulu kwicandelo lezokhenketho laseJamaica, kwaye i-JTB inebhongo ngokwenza uthethathethwano oluphuculweyo lokuvavanywa kwe-COVID-19 kubahambi baseCanada esiqithini," utshilo uDonovan White, uMlawuli wezoKhenketho, eJamaica. "Onke amaqabane ethu eJamaica naseCanada anombulelo kakhulu kuba iindwendwe kwindawo ekufikelwa kuyo ngoku ziya kufikelela kuvavanyo lwe-PCR oluphucukileyo kubuntofontofo behotele yabo ngexabiso elithotywe kakhulu."
Abantu baseCanada abaya eJamaica banokubhukisha iimvavanyo zePCR kwi-intanethi ngaphambi kokuba bahambe okanye ngelixa bekwindawo ekuyo ngokusebenzisa la maqonga mabini azinikeleyo okubhukisha:
Ikliniki yaseBayewest Wellness
Amaqonga e-intanethi abamba yonke ingcaciso eyimfuneko efunekayo ukuze ungene kwakhona eCanada, kubandakanywa nemihla yokuhamba kunye nendawo yovavanyo. Intlawulo yenkonzo iya kwenziwa kwi-intanethi ngexesha lokubhukisha ngekhadi letyala. Iziphumo zovavanyo ezivela kwi-Baywest kunye ne-TSL ziya kuthunyelwa nge-imeyile ngqo kubathengi kwiiyure ezingama-24 ukuya kwiiyure ezingama-48 ezilandela ukuqokelela isampulu.
"I-JTB isebenze nzima kakhulu ukusebenzisana neebhubhoratri zelizwe ezivunyiweyo ukuququzelela ukufikeleleka ngakumbi kunye novavanyo olufikelelekayo kwiindwendwe zethu zaseKhanada," kusho u-Angela Bennett, uMlawuli weNgingqi, eCanada, i-Jamaica Tourist Board. “Sichulumancile kakhulu ukuzisa le nkonzo kudala ilindelwe kwintengiso kwaye yenze uhambo oluya eJamaica lube nomthungo ngakumbi kubantu baseCanada kobu busika.”
Ngokwezikhokelo zohambo zaseKhanada zokungena kwakhona, bonke abakhweli abaminyaka mihlanu ukuya phezulu nokuba sithini na imeko yokugonywa kufuneka babonelele ngobungqina beziphumo zovavanyo olubi lwe-COVID-19 lokungena elizweni. Uvavanyo olusemthethweni kufuneka lwenziwe kwiiyure ezingama-72 zexesha elicwangcisiweyo lokuhamba ngenqwelomoya.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neeprothokholi zokungena zaseJamaica kunye neenkonzo zovavanyo zabahambi baseCanada, Cofa apha.